Amavayibhu e-“Big Easy” maphakathi ne-Alamo
Siyabonga ngokusihlola. Indawo yethu yezivakashi, indawo ehlukile neyimfihlo yendlu yethu, isendaweni ejwayelekile yokuhlala. Siyihora ukusuka e-Ruidoso nase-Las Cruces, cishe imizuzu engama-25 ukusuka e-Cloudcroft, futhi cishe amamayela angu-15 ukusuka e-White Sands Park. I-Alamo inezindawo zokudlela ezimbalwa ezinhle, kokubili ukudla okusheshayo nemali yokugibela yasendaweni, ngokugcizelela kwezinye izindawo zokudlela ezinhle zase-Mexico. Sikumizuzu emincane ukusuka ekuthengeni nasekuthengeni, i-zoo yethu encane enhle, iminyuziyamu, amamuvi, negalofu. Kulula ukuhambahamba.
Indawo yethu isanda kulungiswa kabusha ngokuqondile i-Airbnb. Njengoba ngivela eNew Orleans, bekumnandi ukungeza i-Big Easy decor. Ngemva kokuhlala kuma-Airbnb amaningi onyakeni odlule, sazizwa kahle ngempela ngalokho izivakashi ezikufunayo, okuhlanganisa ubumfihlo, umbhede othokomele (i-king size premium Saatva), i-wifi, i-Netflix, i-Prime Video, ne-Keurig egcwele. ikhofi elingcono kakhulu esingalithola (ikakhulukazi livela ku-Community Coffee, uhlobo olukhethekile lwase-Louisiana). I-toaster, i-microwave kanye nesiqandisi esincane kuyatholakala uma uletha ukudla, futhi sinezinto ezihlukahlukene zokudla okulula.
INQUBOMGOMO YEZINJA KUPHELA, umkhawulo ongu-2. Sicela usazise uma ubhukha ukuze siqinisekise ukuthi indawo yezilwane ezifuywayo ihlanzekile futhi ilungele izinja zakho.
Njengoba iyindawo evamile, imvamisa ithule, inesiren noma uphondo lwesitimela ngezikhathi ezithile, imvamisa iqhelelene ngokwanele ukuze ingabonakali. Umsindo wami oyintandokazi i-F-16 eyivelakancane endiza iphuma e-Holloman (kimi, umsindo wenkululeko).
Sihlala isikhathi esigcwele ngakolunye uhlangothi lwendlu, kodwa asilokothi singene endaweni yesivakashi sethu. Sitholakala ngocingo noma ngombhalo uma udinga okuthile, futhi uma kungenzeka, singakunikeza ihora elijabulisayo kuvulandi ongemuva ngokubona kwakho.
Sihlala isikhathi esigcwele ngakolunye uhlangothi lwendlu, kodwa asilokothi singene endaweni yesivakashi sethu. Sitholakala ngocingo noma ngombhalo uma udinga okuthile, futhi uma k…